Amaski, Iziguli Ezigulayo, Umbhede Wasesibhedlela - JBH Medical
Uyemukelwa ku-Anhui JBH Medical
Funda lokhu ukwazi ngathi!
I-Anhui JBH Medical Apparatus Co, LTD eyasungulwa ngo-2013. Inezinkampani ezixhasayo eziyi-7 futhi inesizinda sokukhiqiza esimile samanje samahektare angama-78000. Inkampani eyisizinda sokukhiqiza ehlanganisa i-R & D neqembu lezentengiso lamazwe omhlaba, elinemikhiqizo yalo eyenzelwe kanye nemikhiqizo ye-ODM yokusebenzela imakethe yomhlaba, njengamanje inabasebenzi abangaphezu kwama-500 abanemali ebhalisiwe engaphezu kuka-12 million USD. Imikhiqizo emikhulu ngumbhede wesibhedlela ophathekayo, okokuphakamisa isiguli, imaski yokuvikela elahlwayo, nawo wonke amanye amadivayisi ahlobene nokwelashwa. Kuvunyelwe uhlelo lwekhwalithi yamazwe omhlaba, i-ISO 9001, ISO14001, ISO 13485 futhi yasungula ilabhoratri eqinisekisiwe ye-SGS, kuyilapho imikhiqizo igunyazwa i-FDA, CE, ne-CFDA, ikhangisa emazweni angaphezu kwangama-70. Besilokhu siqhubekela phambili futhi sithuthukela empumelelweni ngokwethembeka, injabulo nokuzijabulisa.
Kungani Kufanele Ukhethe I-Anhui JBH Medical?
Imikhiqizo ihlangabezana namazinga we-ISO, CE, ne-FDA. Imikhiqizo enegunya lobunikazi. Imboni egunyaziwe ye-SGS.
Ithimba lokunakekelwa kwamakhasimende eliqeqeshwe ngokugcwele, lilungele ukuphendula yonke imibuzo yakho.
Sigcina ngaphansi kwezindleko eziqinile zezinqubo zokulawula ikhwalithi.
Sibamba noma iyiphi inselelo, ngaphandle kwesikhalazo. Asilokothi siphumule ezintweni esizithandayo.
Umbhede Wokunakekela Ikhaya Kagesi Wabantu Abakhubazekile 1.V ....
Isibhedlela Esigoqeka Umbhede Wabantu Abakhubazekile kulula ...
Izendlalelo ezi-3, i-FDA, i-CE ivunyelwe imaski elahlwayo ...
I-FDA, I-Model evunyiwe Model Cha: JBHF001 Disposa ...
Ubukhulu Bokukonke 1110 * 640 * 1480mm Duty Cycl ...
Usayizi sekukonke 1510 * 735 * 1460 mm Duty Cyc ...
Izinto zokuhlunga zeMask Ukwakheka kwe-gauze ...
ukushintshwa kombhede esibhedlela, Umbhede wesiguli esibhedlela, ukulethwa kwabasebenzi, umbhede wasesibhedlela ohamba ngezimoto, imaski yomlomo wobuso, imaski yobuso elahlwayo online,
ukulethwa kwabasebenzi, ukushintshwa kombhede esibhedlela, imaski yobuso elahlwayo online, imaski yomlomo wobuso, umbhede wasesibhedlela ohamba ngezimoto, Umbhede wesiguli esibhedlela,